Profil aluminium ho an'ny indostrian'ny indostria, mpamatsy - Profil Aluminum Shina ho an'ny mpanamboatra indostrialy
Manampy izao tontolo izao mitombo hatramin'ny 1988 isika
Antso fanohanana 86-591-83669891
Fanohanana mailaka sales@foenalu.com
Profil Aluminium amin'ny fananganana
Profil Aluminium ho an'ny indostria
Profil aluminium ho an'ny rafitra varavarankely sy rindrina vita amin'ny rindrina
Varavarankely Window Window
Varavarankely misy varavarankely aluminium
Varavarankely Sliding Window
Ny varavarankely mitsangatsangana sy ny fivarotana
System Door aluminium
Door misy fantsom-bolo aluminium
Varavarana vita amin'ny aluminium
Pintina amin'ny sliding aluminium
Rafitra Fandroana Solika
Famahazana ny fatra an-tendrombohitra
Tariby an'ny masoandro
NY ADVANTAGES IO
FOEN dia orinasa lehibe iray feno, miavaka amin'ny famokarana mombamomba aluminium, rafitra varavarankely, fantsom-by matevina ary kojakoja fanakonana rindrina. Miaraka amin'ny laharam-pamokarana momba an'i China 5 mpanamboatra profil aluminium.
T-slot rafitry ny extrusion aluminium T-slot
FOEN T-slot misy ny mombamomba ny extrusion aluminium FOEN dia nampihatra tamin'ny fananganana milina, ny planeta aluminium, ny indostrian'ny automatique, ny fikarakarana ara-pitaovana, ny fantsom-pifandraisana fehikibo ary ny fiarovana amin'ny milina fiarovana sy ny rindrina. Ny firafitry alumina maoderina dia manome fahaizana ambony sy fampiasa miaraka amin'ny fijerena maso sy fahadiovan'ny velarantany anodized.
Profesora aluminiotra namboarina ho an'ny indostrialy isan-karazany.
FOEN Aluminium dia manana famokarana avo lenta amin'ny famokarana haitao avo lenta.T5 ny fitsaboana hafanana no safidy tsotra indrindra ho an'ny vokatra vokarintsika.Izy dia azo avy amin'ny rivotra sy voajanahary ary avy eo antitra amin'ny haingon-trano avo.T6 Ny fitsaboana hafanana dia mangatsiaka amin'ny rano mangatsiaka mba hameno ny fepetra mafy. .
6063 profilan'ny Aluminum ho an'ny indostria
Ekipa matihanina hiantohana ny kalitaon'ny vokatra
Ny orinasa anay dia manana traikefa mihoatra ny 32 taona an'ny mombamomba ny extrusion aluminium ary manana mpiasa 3500 izahay anisan'izany ny injeniera matihanina 40 sy teknika. Ny mpanjifa dia nahatsapa ny fikarakarana ny kalitao avo lenta tsy tapaka ny orinasa ary te-hividy foana ny vokatra. Ny marika «FOEN Brand» dia nomena ny marika malaza any China.Ny vokatra amidy dia amidy tsara any an-tsena anatiny ary aondrana any amin'ny tsena iraisam-pirenena ihany koa.
T-slotted ny profil Aluminum Anodized
Manana ekipa R&D matihanina izahay mba hamolavola ny faritra ho an'ny filàna ekentsika, ary manana bobongolo efa vonona isika izay afaka mamonjy ny vidinao sy ny fotoana. Manolotra serivisy ODM / OEM, CAD Drawing and base design amina santionany ianao. 10-15 Andro hanaovana ny famokarana bobongolo sy ny fitsirihana santionany, miaraka amina vidin'ny bobongolo. Fanandramana amin'ny bobongolo ary fanamarinana santionany alohan'ny famokarana faobe.
(Mifantoka amin'ny FOEN) Ny fiarovana ny varavarana sy W ...
2907,20Jiona 16, 2017
2019 Glass -Tech varavarana iraisam-pirenena & ...
Ny hatsaran'ny fanavaozana, Ny fironana vaovao o ...
24,05,20 Jiona 16, 2017